Juan Rulfo, akanakisa munyori baba vaPedro Páramo. | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Vanyori, Literature, dzakawanda
Munyori weMexico Juan Rulfo.
Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno aive mufananidzo uye munyori werudzi rweMexico. Aive nhengo yeMexico Academy yeMutauro, mumwe wemitezo yechizvarwa cha1952 uye akapa iyo Princess yeAsturias Mubairo weTsamba.
MuLatin America akazvimisa semumwe wevanyori vakanyanya vezana ramakore rechiXNUMX uye aive munyori ane mukurumbira munyika yake. Hunhu hwaJuan hwakachengetedzwa kwazvo; basa rake Pedro Paramo yakaratidza kupera kwenguva yezvinyorwa zvechimurenga uye yakapa kutanga kweLatin American boom.
1.2 Vechidiki uye zvidzidzo
1.3 Hupenyu hwema Labour
1.5 Makore apfuura uye kufa
2.1 Nyaya Yenyaya
Juan Rulfo akaberekwa musi waMay 16, 1917 muJalisco, Mexico. Baba vake vaive Juan Nepomuceno Pérez Rulfo naamai vake María Vizcaíno Arias, Juan akabva kumhuri yaive nehupfumi hwakagadzikana uye aive mwana wechitatu wevabereki vake, ipapo aive nevanin'ina vaviri.
Vakaenda kunogara mudhorobha rainzi San Gabriel, muJalisco uye imomo mhuri yakatambura nekuparadzwa kweCristero Hondo uye baba vake vakaurayiwa muna 1923, apo Juan aive nemakore matanhatu. Makore mana gare gare amai vake vakafa, vachisiya mbuya vake vachimuchengeta.
Rulfo aive atanga chikoro chake chepuraimari muguta raaigara. Nekudaro, muna 1929, makore mushure mekufa kwamai vake uye nekuti mbuya vake vakatadza kumuchengeta naye, mhuri yakamunyoresa mumusha wenherera uye aifanira kutamira kuGuadalajara.
Pane imwe nguva mumusha wenherera, Juan akaenderera mberi nedzidzo yake yekudzidza; zvisinei, yakanga isiri nzvimbo yaaifarira kuva. Muna 1933 akaedza kupinda muUniversity yeGuadalajara, asi nekuda kwekuramwa kwakawanda aisakwanisa. Mushure meizvozvo akaenda kuMexico City, kwaakange asingakwanise kutanga zvidzidzo zvake.
Pane imwe nguva muguta guru, akatanga kushanda muChinyorwa cheHurumende yeMexico uye akafamba kwazvo nenyika yose, sezvo akange apihwa mabasa akasiyana siyana kwaari uye aifanira kuzviita. Munguva iyi akadzidza zvakawanda zvetsika uye akaburitsa nyaya dzinoverengeka mumagazini.
Muna 1947 akatanga basa rake semufananidzo uye akaroora Clara Aparicio, mukadzi waaive naye vana vana. Akashanda mukushambadzira kukambani kwaakatanga semutori wemifananidzo, Goodrich; panguva iyoyo akashanda pamwe mukusimudzirwa kwedunhu rePapaloapan uye akaburitsa kuInitituto Nacional Indigenista.
Quote nemunyori weMexico Juan Rulfo.
Muna 1953 munyori akaburitsa Bani Rinopfuta uye makore maviri gare gare akaita kuti basa rive pachena Pedro Paramo, iyo yekupedzisira yaive chikamu chake chepamusoro. Pakati pa1956 na1958 Juan Rulfo akanyora Jongwe regoridhe, inoverengeka iyo nehurefu hwayo iye pachake anofunga nyaya. Mabhuku emunyori aya ari pakati pezvakanakisa muMexico.
Bhuku raJuan Rulfo rine gumi nemanomwe nyaya pfupi uye enganonyorwa dzake zvaive zvakakwana kuti apiwe Mubairo weNyika weZvinyorwa muna 1970. Makore mana gare gare akaenda kuVenezuela uye kuCentral University yenyika iyoyo akareurura kuti akasiya mabhuku ekunyora nekuda kwekufa kwababamunini vake Celerino.
Makore apfuura uye kufa
Makumi gumi gare gare, munaGunyana 1980, akasarudzwa senhengo yeMexico Academy yeTsamba uye akaburitsa nhoroondo yake yakanyorwa kare, Jongwe regoridhe. Muna 1983 akapihwa iwo Muchinda weAsturias Award, parizvino inonzi Princess weAsturias.
Munyori akabatwa nekenza uye musi waNdira 7, 1986 muMexico City, ndokufa nemapapu yemphysema. Nekuda kwemukurumbira wayo yakaitwa pachena Los murmullos, journalism anthology yakatenderedza kufa kwaJuan Rulfo, basa rine zvitunha zvine chekuita nerufu rwake.
Mushure mekufa kwemunyori, rimwe remabasa ake rakabuditswazve, nekuti paive nezvikanganiso zvakawanda mukati maro. Zvakare, bhuku renyaya dzaakange aita muhupenyu hwake hwese rakaburitswa, mune iro shanduko yaRulfo semunyori yakaratidzwa.
Bani riri pamoto (1953).
"Havana kupa nyika."
"Ndezvekuti isu tiri varombo kwazvo".
"Vaudze kuti varege kundiuraya!".
"Manheru vakamusiya ega."
"Hausi kunzwa here imbwa dzichihukura".
"Nhaka yaMatilde Arcángel".
Jongwe regoridhe (1980, 2010 yakadzokororwa).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Hupenyu nebasa raJuan Rulfo
Mabhuku mashanu ekutanga chikoro zvakanaka (kana zvakaringana)